Nonomboka ny asany tokony ho enina taona taorian’ny fiverenan’ny Jiosy tao Jodà izy (520 tal. J.K.). Niverina avy tany Babilona niaraka tamin’i Zerobabela sy naminany tao Jerosalema tokony ho tamin’ny taona 521-520 tal. J.K. tamin’ny nanjakan’i Dariosa I i Hagay. Nitovitovy fotoana nahavelomana tamin’i Zakaria sy i Malakia. Satria ny fanamboarana indray ny Tempoly dia nijanona tanatin’ny valo taona vokatry ny zavatra nataon’ireo Samaritana. Niezaka izy sy i Zakaria namporisika ny vahoaka ka nanaitra azy ireo hifoha amin’ny torimasony, sady nitarika azy ireo mba hanararaotra ny fiovan’ny fitantanan’ny Persiana tamin’ny andron’i Dariosa I.
Atao hoe חַגַּי / Ḥaggay , izay midika hoe "ny fialan-tsasatro", ny anaran'i Hagay amin'ny teny hebreo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hagay&oldid=975909"
Voaova farany tamin'ny 20 Oktobra 2019 amin'ny 18:55 ity pejy ity.